Aetna အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင် | အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေး - ခရီးသွားအာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း
Aetna နိုင်ငံတကာနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်များ - ဂလိုဘယ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ Aetna အင်တာနေရှင်နယ် မကြာသေးမီကစစ်တမ်းကောက်ယူ 2,000 ကျွမ်းကျင်သူများန်ထမ်း ကမ္ဘာအနှံ့, သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေခြင်းနှင့်အရှိဆုံးကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းထားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေ့ပြောင်း၏ရှုထောင့်မှထွက်တွေ့ပါရန်။
ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ 91% '' ချိန်းတွေ့ '' ပြည်ပမှာရွေ့လျားအရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုရှုထောင့်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှ (76%) ထက် ပို. မြင့်မားသည်
ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ 90% '' ချိန်းတွေ့ '' သူတို့ရဲ့သုခချမ်းသာတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်နှစ်ကြိမ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျမ်းမျှအား (45%) ဖြစ်ပါသည်
ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ 91% '' မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ရှာဖွေတာ '' သူတို့ရဲ့သုခချမ်းသာတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ပိုပြီးနှစ်ဆထက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျမ်းမျှအား (43%) ဖြစ်ပါသည်
ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ 40% '' တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းရှာဖွေတာ '' သူတို့ရဲ့သုခချမ်းသာတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းခံစားရတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှ (24%) ထက် ပို. မြင့်မားသည်
၏ဤကိန်းဂဏန်းများမှထည့်သွင်းခြင်း ကျွမ်းကျင်သူများ 57% အမျိုးသမီးတွေစဉ်ကြောင့်ခက်ခဲချိန်းတွေ့တွေ့ 43% လူဖြစ်ကြ၏။ ဤအစိန်ခေါ်မှုများ, အမည်ရချိန်းတွေ့, အဲဒီမှာရွေ့လျားလာသောအခါကျွမ်းကျင်သူများရင်ဆိုင်ရလူမှုအတားအဆီးများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခံရနိုင်မလား? ဥပမာ, စစ်တမ်းကိုလည်းထုတ်ဖော်:
ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ 19% ကျား, မဖြေရှင်းသူတို့ကိုရန်အတားအဆီးခဲ့ကြောင်းခံစားရတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှ (13%) ထက်ပို
ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ 15% လူမျိုးစုဖြေရှင်းသူတို့ကိုရန်အတားအဆီးခဲ့ကြောင်းခံစားရတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှ (9%) ထက်ပို
ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ 6% ဘာသာတရားကိုဖြေရှင်းသူတို့ကိုရန်အတားအဆီးခဲ့ကြောင်းခံစားရတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှ (2%) ထက်ပို
သာ 83% လူဖြစ်ကြ၏နေစဉ်ကျား, မတစ်ဦးအတားအဆီးဖြစ်တွေ့ရှိသောကျွမ်းကျင်သူများ၏, 17% မှာအမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။
အဆိုပါစစ်တမ်းကိုလည်းတကမ္ဘာလုံး, ကျားမခွဲခြားဆက်ဆံမှုအရှိဆုံးအမျိုးသမီးခံစားခဲ့ရခဲ့သည်, ထိုထုတ်ဖော်ပြသ - 25% ကျားမလူတို့သညျ့ 5% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, သူတို့အဘို့အတားအဆီးဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုပြောနေအတူ။
Aetna အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာအနှံ့ထက်ပို 800,000 အဖွဲ့ဝင်များမှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကြိုးခံစားခှငျ့ပေး, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ Aetna နိုင်ငံတကာနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကတွေ့နိုင်ပါသည် ဒီမှာ.